Iingcebiso Ezilishumi Zokutshatyalaliswa Kwakho Umdlavuza weCafeine
Iingcebiso Ezilishumi ZokuKhafaza I-Caffeine
Ngaba ufuna inkomfa okanye ezimbini zekhofi ukuze uqale ekuseni? Ngaba unqwenela enye ikhofi okanye i-colas encane ukuze uyifumane emini? Ngoxa ufikelela kwelinye indebe, ufumanisa ukuba udla umnikelo, isiDanish, okanye ezinye ioli, ukuphatha ushukela? Ukuba uphendule "ewe" kuyo nayiphi na le mibuzo, funda kwaye ukhabe umkhwa we-caffeine kakuhle, uze uphinde uphendule ngobomi bakho.
Vuka uphinde uhlasele iCaffeine Habit for Good
Ixesha lokuba kucace kwaye uvume ukuba abaninzi bethu banomlutha we-caffeine. Sithengile kwisimo sengqondo sentlalo kwaye sizenzele ingqondo ngokwabo ukuba sikholelwe ukuba sidinga i-caffeine ukuze sivuse kwaye sihlale sihamba. Kufuneka siqaphele ukuba i-caffeine, engenakulimala njengoko kubonakala ngathi, yinto evuselela ngokomthetho eyabangela ukuphazamiseka kwenkqubo yethu yesantya.
Ngaphambi kokububula, "Akukho nto enye kufuneka ndiyilahle," nceda uqonde ukuba anditsho ukuba nabani na onokuphika into enonwabo kunye nemikhuba enxulumene nekofi, itiye, kunye nokusela kotrocolate. Emva kwakho konke, khumbula ukuba umntu osemdala uthi: "Into encinci yezinto othanda ukuzenzayo." Esikhundleni sam, ndiphela nje ukubonelela ngokuqinisekileyo kunye nombono ongenakucinga ngayo abanye bethu. Ngaba uqaphele ukuba iipesenti ezisibhozo zantlanu zabamaMerika zisela ikofi? Ngaba silapha kweli lizwe liqhuba kwi-caffeine eqhutywe phambili?
Usuku ngalunye siva ngakumbi malunga nemiphumo yokuxinzezeleka kwaye abaninzi bethu banomdla wokuba bephule baze bathathe ubomi ngokukhawuleza, kodwa siyaqhubeka sizabalazela kwaye sibona iimpawu zokusebenzisa i-cafeine ingasetyenziswanga oko kukuthi, ukuxinezeleka, ukukhathazeka, ukungazinzi, isisu, isisu , nokuhlanza.
I-caffeine yinto efunyenwe ngokwemvelo kumaqabunga, imbewu, izithelo kunye namantongomane angaphezu kwemashumi anesithandathu ezahlukahlukeneyo kuquka amaqabunga etiyi , iimbotyi zekhofi kunye kwaye zifumaneka kwiindawo ezininzi zokusela ezifana ne-colas.
I-caffeine yenziwe ngokukodwa yongezwa kwimveliso ethile yokutya kwaye yongezwa kumayeza amaninzi angaphezulu kwamayeza.
Akukho mpendulo yangempela kulo mbuzo. Umntu ngamnye uya kuba neentlobo ezahlukeneyo zokunyamezela kwi-caffeine. Umntu omnye unokuziva ephoswe ngokupheleleyo emva kweebhokhwe ezimbini nje ezisibhozo, ngelixa elinye liyakwazi ukunyamezela ezine, ezinhlanu, nokuba zihlandlo ezithandathu kwi-cafeine ngosuku olunye. Impendulo kufuneka ibe yinto yokuba sisihlolisise ngokwayo, siyikhumbula ngemiphumo ye-caffeine emzimbeni wethu kunye neenkqubo ze-nervous.
I-caffeine ifakwa kwaye isasazwa ngokukhawuleza emzimbeni; idlula ngqo kwinkqubo yesantya okanye kwindawo yengqondo. I-caffeine ayiqokelelwanga emzimbeni okanye kwigazi, kodwa ikhutshwe emcini emva kweeyure ezininzi emva kokuba idliwe. Kuyinyaniso yokuba ukuhoxiswa ngokukhawuleza akukhuthazwa oogqirha, kwaye iimpawu zokurhoxisa zingabandakanya iintloko, ukulala, ukuxineka, ukuhlanza nezinye iimpawu. Kunoko, ukunciphisa ngokunyanzeleka kokungeniswa kukwacetyiswa nangona abantu abaninzi befumanisa ukuba ukutshintsha kokuqala kwimveliso ye-decaffeinated kubancedisa ukuphula umlutha.
IiHooks. . .
Kwenzeka njani ukuba sikwazi ukufumana umlutha we-caffeine? Kukho izizathu ezininzi njengoko i-caffeine ibonakala ibonakala ingenakubungozi ngokukhawuleza xa singakwazi ukulala ngokwaneleyo kwaye singenzi ixesha lokuphila kwethu okuxakekile ukufezekisa iimfuno zethu ezingokomzwelo nezomzimba.
Umlutha uquka ukubonakaliswa kwethu ngaphezu kwemveliso kunye nemifanekiso esamkelwayo kunye nokukhuthazwa kuluntu. Kuye kulungele ukuhlala usebenza. "I-Busy" ibonakala ibalulekile, ikhuselekile kwaye izalisekile, kodwa ngaba kunjalo? Mhlawumbi ikona elikhulu kunazo zonke kukuba sithengile kwiingcinga ngokwabo ukuba sidinga i-cafeine ukuze kusivuselele kwaye siqhubeke sihamba, kwaye ngoko ke siba ngamakhoboka omkhwa.
Ukunyusa i-caffeine, kwongezelela, kunokubonakala kungenakonakala. Wonke umntu uyakwenza, akunjalo? Kodwa kukho impembelelo enkulu.
Masibuyele size siphindele kwakhona. Xa uhlala unamathele kwaye usebenza kwiindawo eziphakamileyo zobuxoki, uyeka ukuziva kwaye wazi indlela oziva ngayo. Uphuma nje ekuthinteni nomzimba wakho ngokomzimba nangokomzwelo. Uziva ungakhathali kwaye uyazi ukuba kufuneka uphumle kodwa, endaweni yoko, uzitshintshe ngokuqhubekayo kwaye uqhubeke nokunyamezela kakhulu kwinkqubo.
Cinga ngoluvo oluvuthayo oluvalayo xa utyile ikhofi, itiye, okanye i-colas. Uziva ungachukumiswanga ngesisu sakho kwaye inxalenye yomzimba wakho ayiva kakuhle. Emva koko kulula ukuqhubeka nokuphucula ngaphezu kokutya okungenampilo.
Ngaba wayesazi ukuba isisu sihlalo seemvakalelo zakho ? Oku akusiyo nje ingcamango efana neyengqondo namhlanje le mihla iyaqonda le nyaniso kwaye idla ngokubhekisela kwisisu njengengqondo encinane. Isisu yindawo yokuqala esivame ukubeka isisindo kwaye kaninzi kwindawo enzima yokukhulula isisindo. Inzuzo yesisindo engavumelekanga kwisisu ayixinzelelekanga uxinzelelo kunye nemithwalo yemvakalelo. Xa siyeka ukukwazi ukuziva, siyayeka ukucinga, kwaye sibeka ubomi bethu ngokuzenzekelayo.
Xa ungaphumi kwisisu sakho kunye nemvakalelo yakho, ngokuqhelekileyo ukuba ufuna ukutya into enandi, enamafutha, kunye nokungahambi kakuhle. Abo baphatha isibini kunye ne-caffeine iziphuzo ngoko ngoku unentuthuzelo yokutya nokuphuza umjikelo owenziwe. Emva kwexesha esithile siyeke ukuziva size sijongane neemvakalelo zethu. Esikhundleni saloo nto siyifumana sisitya kunye nokusela ukuze sizive sihle.
Ngaba Wake Wayazi ukuba Kutheni i-Starbucks idume kakhulu?
Kutheni na i-spendthrift phakathi kwethu ihlawula ixabiso eliphezulu lekhofu yekhofi? Ngokupakishwa okukhulu kunye nokuthengiswa kakuhle kwe Starbucks kuzalisa i-niche kwi-psyche yelizwe. Uchonga luyinxalenye ebalulekileyo. Simane sichaze ngokuthenga kwethu. I-Starbucks ikhathalela ukukhawuleza ekuthengeni umthengi kunye nokukhawuleza nokuphucula umthengi.
Ukuhamba kwamatye kukhululekile kwaye kuvakalelwa njengendawo enokuthi ibe yinto efanelekileyo yokwenza umntu omtsha, kodwa ukhuselekile ngokwaneleyo xa ungakakulungeli okwamkela umntu omtsha ekhaya.
I-Starbucks, kubonakala ngathi, ipholile kwaye thina-umthengi-sithengile kweso sikhulu. Kodwa akupholile ukuxininisa imizimba yethu nge caffeine, kwaye akupholile ukubeka iimvakalelo zethu ngeemveliso ezinokukhawuleza. Xa sifihlile iimvakalelo zethu zokwenene, kuya kuthatha ixesha elide ukuba sizibonele ngokwenene. Ngaba kungeyona nto ebomini bethu bonke ukuyeka ukutshintsha amava obomi kunye nolonwabo ngenxa yokutya kunye neziphuzo?
IiCokes kunye neeVuffs
Masibe nolwazi. Kukho ubuninzi beenkcukacha ezichaza imiphumo yobuncu be-carbonate kwi-metal eroding. Khawucinge nje ukuba zezi ziphulo zenza ntoni esiswini sakho! Iikhoksi kunye neziphuzo ze-carbonated ziqulethe kakhulu (isisulu, i-sweeteners), zombini umlutha kwaye kulula ukuyisebenzisa. Zingabangela ukungalingani kwinqanaba leshukela legazi, elikhokelela kwisifo sikashukela, izibetho, iingxaki zentliziyo, ukuxinezeleka kunye nokulala. Ngaba akunangqondo ngathi ukuba siqale namhlanje ukukhaba umkhuba we-cafeine kwaye sibuyise ubomi bethu?
Yiba nesigulane kwaye usetyenzise la macebiso alandelayo ukuze uphinde ufumane kwakhona kwaye uxoxe ngokuphila kunye nokuphila.
Ukudibanisa Izidingo Zakho Zokulala - Thola ukulala , ukuphumla nokuphumula. Yenza ixesha lokuzalisekisa iimfuno zengqondo, ezempilo nezengqondo.
Ixesha eliMnandi leMpilo - Jabulela ixesha lokuphumla kwaye utshintshe imimiselo yasekuseni kwindlela ezincinane. Ukuphefumlela umoya omtsha, ukuhamba, nokusela ishushu lokushisa kwamanzi ukongeza i-lemon ye-lemon. Tense kwaye welula inxalenye nganye yomzimba wakho ngokukhawuleza.
Yiba nesimo esihle - Sebenzisa iziqinisekiso ezintle ukukhaba kuqala usuku lwakho, ingqondo yakho nobomi bakho. "Ndingumntu okhululekile kwaye onamandla," "Ndiyithanda ngokupheleleyo ngaphandle kwimeko," "Umzimba wam ucocekile, uphilise kwaye uzilinganise," "Ndihlala ndifumana ixesha elaneleyo."
Yithi Cha! Sitshintshela kwi-decaffeinated drink. Yithi "hayi" kwi-colas nakwezinye iziphuzo ze-carbonate.
Xhuma kwiNkulumzo yangaphakathi - Xa uvuka, zibuze: "Ndingathini ngoku?" Yamkela indlela ozivakalelwa ngayo. Yenza into onokuyenza kuloo mizuzu uze ubeke ezinye ngokucace ngaphandle kwangoko. Ungavumi ukuphazamiseka. Khumbula ukuba ucinezelekile ngokuqinisekileyo kuthetha ukuthintela.
Musa ukuthenga kwi-Myth - Xa elo lizwi ngaphakathi kwakho lifuna i-caffeine, qhekeza kuphela umkhuba wokuphendula. Phuza okanye wenze into ehlukileyo kunoko. Yithi "hayi" inkolelo yokuba ufuna i-caffeine ukuba uhambe.
Uphefumle ngokujulile - Ukuba uziva utyinekile, ugxininise okanye udinga ukuphakama, umzimba wakho uphefumle , uphefumle ngokuchukumisayo uze uhlabe izandla zakho ngaphezu kwentloko yakho kathathu. Zibuze into oyifunayo ngoku kwaye uzalise iimfuno zakho.
Yenza ixesha lokuphumla - Yenza ixesha lokuphumla kwaye ujabulele ukuphakama kwemvelo elula. Yenza ukhululekile kwaye uzive ukhululekile kwaye ukhululekile.
Yiya, Musa ukungena kwiinqwenelo - Ukumisa ukukhanga kwe-caffeine okanye ukutya okungaxhamli kakuhle, phendula ngokuqinisekileyo engqondweni yakho: "Ndiyayeka ngokulula kwinto endiyifuniyo." Beka isandla sakho esivulekile ngokusesikweni esifubeni sakho uphinde uphinde uhlambele phambili uze ujikeleze kwaye ujikeleze ngeenxa zonke. Dwala umzimba wakho emva kwaye phambili. Qhubeka uphefumlela ngokukhulu ngomlomo ovulekile. Uyakuziva uthuthuzelekile, uxolile, udibanise, kwaye uya kulugqithisa ukunqwenela.
Yenza Unonophelo kunye noKhetho olunempilo - Yiba yinkokheli kwaye ungengumlandeli. Yenza ukhetho oluphilileyo ngelixa wodwa, kunye nosapho, abahlobo kunye nabo osebenza nabo. Ungadluli i-caffeine ngenxa yokuba wonke umntu wenza.
Qaphela kwakhona: Amanqanaba amane okulwa nokuLungiswa kwakho kokutya
Ukuhlanjululwa Iphuku - Ngokuphathelele Kwamathuba Okuqala I-Sweat Lodge Experience
Iimpawu malunga ne-Ayurveda kunye neRicy
Amanyango oMandla anikwe umgama omde
Indlela yokuCoca kunye nokuTyala umzimba wakho
Iilwimi Ukujonga iSpanish
'Inkcazo kaMnumzana' kaJohn Henry Newman '
Ukusebenza kunye neeArrays kwiJava
Indlela i-Emperor Qin yamaStototta ayenziwa ngayo
Ukutyalwa kweentyantyambo ze-Dogwood kwiYard yakho
IsiGrazil Isigama: Ukuthengwa kunye namaxabiso
Iintlobo zeZityalo zokuHlalwa kweZityalo
Yintoni iCompval Compound?
'Aller,' 'Imfanelo,' 'Faire' kunye nezinye iilwimi zesiFrentshi eziNcedisayo
Igama legama le-COOK Intetho kunye nemvelaphi
UAlexandro Omkhulu ufika eNdiya
Ixesha lokuSindisa kweMini